ဒီနေ့မှာ အသက် (၂၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မေတိုးခိုင် - Cele Gabar
ဒီနေ့မှာ အသက် (၂၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မေတိုးခိုင်
ပရိသတ်ကြီးရေ မေတိုးခိုင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မင်းသမီးချော အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ တူမလေးဖြစ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့သူပါ။ မေတိုးခိုင်ကတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း ရွှေကြိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ောဆင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ မေလ (၇)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ဖြစ်တဲ့ မေတိုးခိုင်ရဲက မွေးနေ့ရက်မြန်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေတိုးခိုင်ကလည်း ဒီနေ့သူ့ရဲ့မွေးနေရက်လေးကတော့ “ဘဝမှာဘယ်တော့မှမမေ့တော့မယ့် မွေးနေ့တစ်ခုကိုလည်းဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးပြီ.. It isaprivilege and I am grateful to be able to celebrate with my loved ones beside me now. A year older,ayear bolder ” ဆိုပြီး မွေးနေ့အမှတ်တရရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေထားခဲ့ပါသေးတယ်။
မေတိုးခိုင်ကတော့ ဒီနေ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ အသက် (၂၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ဒီနေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မေတိုးခိုင်ရဲ့မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ဒီေန႔မွာ အသက္ (၂၇)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ေမတိုးခိုင္
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေမတိုးခိုင္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ မင္းသမီးေခ်ာ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ရဲ႕ တူမေလးျဖစ္ၿပီး သူကိုယ္တိုင္လည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနခဲ့သူပါ။ ေမတိုးခိုင္ကေတာ့ ကိုယ္တိုင္လည္း ေ႐ႊႀကိဳတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္ောဆင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ပရိသတ္အခိုင္အမာရရွိေနခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ ေမလ (၇)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ ျဖစ္တဲ့ ေမတိုးခိုင္ရဲက ေမြးေန႔ရက္ျမန္က်ေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမတိုးခိုင္ကလည္း ဒီေန႔သူ႔ရဲ႕ေမြးေနရက္ေလးကေတာ့ “ဘဝမွာဘယ္ေတာ့မွမေမ့ေတာ့မယ့္ ေမြးေန႔တစ္ခုကိုလည္းျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးၿပီ.. It isaprivilege and I am grateful to be able to celebrate with my loved ones beside me now. A year older,ayear bolder ” ဆိုၿပီး ေမြးေန႔အမွတ္တရ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ပုံေလးေတြကို မွ်ေဝထားခဲ့ပါေသးတယ္။
ေမတိုးခိုင္ကေတာ့ ဒီေန႔ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ အသက္ (၂၇)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေတြလည္း ဒီေန႔မွာေမြးေန႔က်ေရာက္တဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ေမတိုးခိုင္ရဲ႕ေမြးေန႔အတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Previous post မွေးနေ့အလှူအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြာဇံကြော်ပြီး လိုက်လံဝေငှလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဟန်နေတာ
Next post ကွယ်လွန်သူကိုသားကြီး (ဒွေး)ရဲ့ မွေးနေ့အလှူအနေနဲ့ အရုဏ်ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့တဲ့ အရှင်ဇောတိက တဖြစ်လဲ သရုပ်ဆောင် ဇွဲနိုင်ဝင်း